crank icho kumusoro! heino mafoni gumi ane mutauri ane ruzha kubva 2017
Kuru Nhau & Ongororo Crank it kumusoro! Heano mafoni gumi ane vane ruzha mutauri kubva 2017
Crank it kumusoro! Heano mafoni gumi ane vane ruzha mutauri kubva 2017
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufuratirwa kana uchisarudza smartphone ndeye mutauri wayo ruzha uye mhando. Imwe haina & apos; haigare iine mukana wekuyedza kukwidziridzwa usati wamwaya mari yeiyo smartphone nyowani.
Kana uchikwanisa kunzwa yako ringtone pamusoro pe ambient ruzha chinhu chakanyanya kunetsekana chako, iwo gumi mafoni akanyorwa pazasi anofanirwa zvirokwazvo kuongorora. Ese ari kubva muna 2017 uye akayerwa mune yedu mutauri ruzha miedzo. Iyo yakakwira iyo nhamba, inowedzera ruzha mutauri.
Vamwe vevaida kukwikwidza pano vanokushamisa. Nekudaro, gara uchifunga kuti kushevedzera hakuwanzo kushandura kune yepamusoro odhiyo mhando.
'Gudzanzwi rimwe chete riri pazasi rinotarisira kuburitswa kwekuteerera. Iyo yakanaka kwazvo uye haina & apos; haina kubvaruka senge kune vamwe kune vayo vanokwikwidza bhajeti, asi kudzika kuri kushomeka. ' - Verenga yedu yakazara ongororo pano .
9. Kudza 8 Pro - 79dB
'Iyo foni & apos; s kugona kweaudio kuri pamusoro nepakati, zvese maererano nemahedhifoni kuburitswa uye nezwi rakapihwa gudzanzwi, iro rinogona kushandisa zvishoma oomph uye ruzha runobuda zvishoma zvishoma.'- Verenga yedu yakazara ongororo pano .
'Mwaka uno, Google inokwidza mutambo wayo wemultimedia wePixel 2 nekuvapo kwematauri maviri akatarisana-kumberi. Nepo mamwe makambani achikwanisa kuenderera pamwe nekubudirira zvine hukama kubatanidzira mutauri wepashure-mutauri nechimutauri chekuteerera, hapana chaicho kurova kwechinangwa chakadai seichi, kuisa kukoshesa chaiko pamhedzisiro inonyudza.
Uye sekutarisira kwatinoita, izvo ndizvo chaizvo zvatinowana kubva kuPixel 2 nePixel 2 XL. Pakati pevaviri, isu & apos; isu tinoti maspika pafoni diki ane mupendero mudiki, achive ese ari kumusoro uye kurira kuchenesa zvishoma pane paXL. Pamwe izvo & apos; nekuda kwekuve nenzvimbo yakawanda yekushanda nekutenda kune akakurisa bezels, asi kana foni haifanirwe kukutungamira iwe zvakare zvisirizvo. '
7. Razer Runhare - 80dB
Razer Runhare Ongororo
'Kumberi kwefoni kunotungamirwa nehukuru, 5.7-inch skrini, asi pamwe sekubata maziso ndidzo mutauri muhombe dzakakwenenzvera panhivi & apos; kumusoro uye pasi.'Iyo Razer Runhare & apos; s vatauri vanogona kunge vasiri ivo vanonzwika zvakanyanya, asi ivo ndivo zvechokwadi akanakisa eboka maererano neodhiyo mhando. Aya ndiwo ekutanga magudzanzwi e-smartphone kuwana THX certification. Mutauri wega wega ane gudziri yake uye vaviri vacho vakatariswa kuDolby Atmos zviyero. - Verenga yedu yakazara ongororo pano .
Samsung Galaxy S8 + Ongororo
'Gudzanzwi reGirazi nyowani rine simba kwazvo, asi zvakare rakakura. Chokwadi, haigone & rsquo; kuendesa mabass kana chero chinhu padyo, asi kune mutauri wefoni, zvinonzwika mushe. '- Verenga yedu yakazara ongororo pano .
Iyo ZTE Axon M inoratidzira ine hunyambiri-mutauri setup iyo & apos; s iri pazasi payo. Masipika akakosha pakufona uye nekushandisa midhiya, kunyangwe zvikavharika nyore kana iwe & apos zviri munzvimbo yemamiriro (iwo maviri ma skrini akafukurwa). - Verenga yedu yakazara ongororo pano .
'Sezvineiwo, gudzanzwi riri paMoto G5 rakavakirwa mukati meyeyezeve pane kumberi. Ichi chaicho chisarudzo chakanaka: zvinoreva kuti ruzha ruri kuuya kwauri kana iwe uchiona mavhidhiyo eYouTube kana kuridza rwiyo. Hunhu hwakanaka: haina & rsquo; haina kunyanyisa, kana kujekesa, & rsquo; inongori tsika, asi magudzanzwi mazhinji efoni anowira muchikamu ichocho. Tinoshuva kuti dai yanga iine zvakadzama pairi, sezvo parizvino ichirira zvishoma. '- Verenga yedu yakazara ongororo pano .
3. Hupenyu hweHTC U11 - 81.1dB
'Kutanga, pane & mutauri, mutauri, asiri akanaka. Iyo & apos; ine ruzha, asi odhiyo inowanzo kuve nehunhu hwemhando iyo inosimbisa yakaderera maficha nekushayisa crisp treble. '- Verenga yedu yakazara ongororo pano .
2.Asus ZenFone AR - 82.6dB
'Asus & rsquo; gadziriro yemutauri yekumisikidza, vaviri vaviri nehunyanzvi hweDTS kuburitsa ruzha rwakajeka uye rwakajeka kupfuura mafoni mazhinji. Pamusoro peizvozvo, isu & rsquo; takapa nzira dzinoverengeka dzekugadzirisa kurira, uko kunosanganisira mabass uye anotenderera anotsvedza, chati yeEQ, uye akasiyana profet kurira kwepamhepo kune chaiwo maficha, mhando dzefoni, uye zviitiko zvekuteerera. '- Verenga yedu yakazara ongororo pano .
'Une gudzanzwi rimwe chete repasi-rinopfura paNokia 8. Chinzvimbo chacho chakati omei uye unogona kuchimonyoroka paunobata foni, asi hunhu hwacho huri pamusoro pevhareji. Iyo Nokia 8 mutauri inogona kuwedzera zvakanyanya kupfuura mafoni mazhinji kunze uko uye nepo ichishayikwa zvishoma pakadzika, inowana zvakachena zvakakwana kuburitsa izvo zvinoita kuti zvionekwe munzira yakanaka. '- Verenga yedu yakazara ongororo pano .
Inoyerwa pa 1m chinhambwe. Iyo yakakwira iyo nhamba, inowedzera (kwete hazvo zviri nani) mutauri.
zita dB Yakakwirira iri nani
HTC U11 hupenyu 81.1
ZTE Axon M 80.6
Razer Runhare 80
Kudza 8 Pro 79
Zvese zveYakanakisa Kutenga & apos; mafoni (ane zvirongwa) anouya ne $ 50 e-chipo kadhi vhiki ino chete
Fitbit Versa smartwatch Ongororo
Sevha $ 300 paApple & apos; s MacBook Pro (15.4 ', 2018) ine Intel Core i7 processor, Bata Bhawa, 16GB RAM, 512GB SSD
Vatengi veAT&T vanogona kuronga musangano pamhepo kushanya kwechitoro
Rarama Mapikicha kune vese! Mifananidzo yeGoogle ikozvino inoita kuti iwe ugovane uye utarise yako inofamba mifananidzo pamusoro peIOS, Android, uye PC
Pirates dzeCaribbean: Tides yeHondo nzira mutambo mutambo unogara pane nhare
Chii chinoitika kune yako iPhone uye iCloud account mushure mekufa kwako?
5 eakanakisa asina kuvhurwa mafoni pasi pe $ 100 (US)
Galaxy Note 20 Ultra optical zoom vs zoom yedhijitari